Huawei P9 Plus Review - Rule News
P9 Plus waa smartphone ugu fiican Huawei sameeyey si uu taariikhda ... haddii aadan tirin 6p Nexus. Waxay qaadataa formula guusha ee P9 oo kaliya ku darayaa in yar oo ah in ay.
flagship super-xajmi adag Chinese waa weyn, la camera xiiso leh, selfies fiican, waxqabadka uu faham iyo nolol batari adag – waxa kaliya ceeb ku saabsan Android ee kartoo
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “dib u eegis Huawei P9 Plus: phablet heer sare dib u qabtay by software sub-par” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo theguardian.com on Tuesday 7-dii June 2016 06.00 UTC
The Huawei P9 Plus waa version weyn qurbaanka ugu horeysay u fiican saaraha Chinese smartphone ee. Waxay sheegtay in "lagu daray in si kasta" - oo ma niyad jabin.
Sida la "daray" versions of casriga saarayaasha kale ', P9 Plus ku eg a P9 Suurka kor by 5% in photocopier a. Waa walaal yar waa soo jiidasho ah, si fiican u sameeyey smartphone, P9 Plus ku siman yahay sidaas darteed, inkastoo weyneeyey ah.
jirka biraha la taabtona waa nice
P9 Plus The uu taabtona waa nice yar sida saareen Isbaheysiga cas agagaarka button awoodda iyo towns a yar oo guduudan oo jirka biraha. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Waxay leedahay shaashad weyn 5.5in, waa wax yar ka dheer, ballaaran oo ka culus. Waxaa ku yimaado mid midabka – cawl quartz – midab cawlan gunmetal soo jiidasho leh lahjadda xiiso cas agagaarka batoonka.
dib waa ka badan P9 iyo dhinacyada wax yar fekrado macaan, ayaa dareensan in aad u fiican in gacanta. Waxa ay u muuqataa oo qayb kasta oo uu dareensan yahay smartphone a-dhamaadka sare premium.
Marka la barbar dhigo Samsung ayaa 5.5in Edge Galaxy S7, P9 Plus waa inaga 1.4mm, 2.7mm ballaaran oo 5G culus, laakiin 0.7mm khafiif ah, halka Apple iPhone 6S More waa 5.9mm inaga, 2.6mm ballaaran, 0.3mm dhumuc weyn iyo 30g culus, taas oo ah mid aad u dareemi gacanta ku, taas oo adag in ay la tacaalaan.
screen waa 5.5in buuxa HD AMOLED, waxa wanaagsan-raadinta, midabo iyo leedahay kiiyoo inky qoto dheer. At 401ppi ma aha arrin sida pin-af badan yahay sida ay xafiiltamaan ee ka Samsung iyo Google, oo ay ku jiraan Huawei ee u gaarka ah Nexus 6p, laakiin xaglo daawashada weyn oo ka farxin doontaa in ugu.
Hooska farriimaha The ekaan macruufka badan Android Google. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Kaydinta: 64GB + kaarka microSD
Nidaamka Operating: Android 6.0 la UI Qiiro 4.1
Camera: 12MP camera gadaal dual, 8Xildhibaan camera hore jeeda
Xiriiriyaan: LTE, Wi-Fiac, NFC, IYO, Bluetooth 4.2, USB-C iyo GPS
Cabirka: 152.3 x 75.3 x 6.98mm
Faham ka leh nolosha batari adag
goobaha iyo kormeerayaasha xoog lagu badbaadinayo Huawei ee caawin aqoonsado apps dhibaato ka dhigi batteriga dheer. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
P9 Plus The qaybsada processor ka P9 ee, Huawei ee octa-core Kirin 955 chip, laakiin ku darayaa 1GB dheeraad ah RAM keenaya 4GB iyo leedahay kaydinta double la 64GB dhisay, halka weli booska card microSD ee ku daray more.
P9 Plus waxay ahayd faham ka, ku shaqeeya iyada oo wax walba oo aan ku tuuray waxa at oo ku soo orday qabow badan ay walaalaha yar yar. Nolosha Battery sidoo kale wuxuu ahaa wanaagsan, waarta 38 saacadaha u dhexeeya eedeeyay isticmaalka qorshe awood smart Huawei ee, boqolaal farriimaha, 10 saacadood ee dhegaysiga music, isticmaalka dhirta iyo app shan saacadood iyo bar kisiga ee sawir iyo ciyaaraha. Dadka intooda badan tahay heli doontaa laba maalmood oo u dhexeeya eedeeyay. Kale, hababka awood lagu badbaadinayo dheeraad ah dagaal badan waxaa laga heli karaa, iyo sidoo kale kormeerayaasha isticmaalka app, taas oo ka caawisaa weed out apps awood-gaajaysan.
Si ka duwan P9 ah, P9 Plus ka mid ah xukun degdeg ah oo waafaqsan ugu casriga kale-dhamaadka sare, si hogaanka kor uma baahna saacadood ku xiran korontada a.
UI qiiro 4.1
EMUI ku darayaa xuduudaha fool xun in ay barnaamijyadooda iyo dhigaysa qadar weyn oo isbedel ku fiirin iyo dareenka of Android. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
P9 Plus waxay leedahay Android Huawei ee dib u habaynta 6.0 nidaamka hawlgalka Marshmallow yeedhay UI Qiiro (EMUI 4.1). Waa dhab ahaan la mid ah sida P9 iyo ekaan Apple ee macruufka, oo ay ku jiraan qasbo oo dhan Chine ee lagu rakibay on telefoonka in ay homescreen ah, ma ka Faydatay Dhudhumadeeda marti Heerka dhaansha app Android.
Qaar ka mid ah jeclaan doonaa fiiriyaan, dadka kale maayo. Waxay leedahay gacanta adag ee apps, waxa wanaagsan, iyo waxa aan sida bloat-ka buuxsamay sida versions kale ah ee Android laakiin ma aha sida wanaagsan sida aragnimo Android caadiga ah.
Wixii dheeraad ah oo ku EMUI 4.1, fadlan akhri dib u eegis ee P9 Huawei ah
scanner The faraha dhabarka waa mid ka mid ah ugu dhaqsaha badan oo ugu sax ah oo ku saabsan suuqa. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
scanner The faraha dhabarka waa mid aad u dhakhso ah, sax ah oo si fiican u dhigayaa size of phone. Ma aha mar aan imtixaanka bay ku guul daraystaan ​​in ay aqoonsadaan aanan fartayda. Waxaad ma furo kartaa telefoonka adiga oo isticmaalaya scanner faraha oo aan gaaray telefoonka kor, Si kastaba ha ahaatee.
Cadaadiska screen xasaasi ah
Riix farta aad adag oo ku saabsan sawir ee app gallery ka soo booda loupe weyneyso ah. The adag waad ku hardiyi weyn heerka weyneeyey. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
P9 Plus waa mid ka mid ah aaladaha ugu horeysay Android in ay screen xasaasi ah cadaadiska, oo Huawei oo ku baaqay in la taabto Press.
Its fulinta asal ahaan waxay muraayad hab Apple ee 6S iPhone Plus. Riixaya adag on app icon Huawei ah soo booda qaar ka mid ah falalka deg deg ah iyo tuuryo. Riixayo adag weli aad qaadataa si deg deg ah si ay hal talaabo oo aad doorato, sida toos ah u hab sawir gudahood app camera ah.
Users sidoo kale dooran kartaa inaad ku dhuumato guriga navigation ah, iyo dib u dhawaan loo isticmaalo badhamada apps hoose ee shaashadda oo ay ku dhex kiciyo la cadaadis sii kordhaya, ama qarka u saaran geesood midigta ama bidixda ah ee kore sida tuuryo u bilowdo apps.
In app gallery ah, cadaadinaya adag on a photo kor u keentaa loupe a weynaynaya la zoom toos saamiyeed si ay sida adag aad riixdo. Waa mid aad u jawaabaan, iyo qalab fiican wax yar ka ah kormeerida faahfaahsan, laakiin dadka badankiisu ma iska fiiriya inaan adag ee sawirada ay.
taabashada Press ayaa wajahaya dhibaatooyinka la mid ah sida Apple ee 3D Touch – way adag tahay in la ogaado waxa ay taageertaa waa, taageero app dhinac saddexaad waa heer sare lagama yaabo oo aan hubin in qof ilaa doonaa iyadoo la isticmaalayo ma ihi. Waxay si firfircoon uga helo jidka dhaqaaqin walxood hareeraha homescreen ah, laakiin furi karo.
Android laga yaabaa dar taageero hooyo cadaadis screens xasaasi ah mustaqbalka, laakiin waxaan weli ku qanicin by fulinta wixii hadda.
The Mudanayaasha camera dual on dhabarka: hal camera madow iyo caddaan, mid ka mid ah midabka. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
The camera dual danbe "co-danbeeyay la Leica" waa nidaam la mid ah camera sida rakibay P9 ah, iyo sida oo kale waxay soo saartaa images raadinaya wanaagsan oo badan oo xiiso leh ilaa xad in ay isticmaalaan.
camera monochrome waa gaar fiiqan, oo ka dhigaysa sort saxda ah ee maadooyinka runtii aqrisanin.
Wixii dheeraad ah oo ku camera ah dual, fadlan akhri dib u eegis ee P9 Huawei ah
camera sawir hore u jeeda ayaa gelis si dhakhso ah, taas oo kuu ogolaanaysaa in iftiin badan leh f-stop ah 1.9, marka la barbar dhigo f2.4 ku P9 ee. Farqiga u dhexeeya waa dareemi. Selfies eegto af, dhalaal iyo faahfaahsan oo dheeraad ah. In iftiiminta ahaan saboolka ah waxaa soo saaray qaar ka mid ah kuwa ugu wanaagsan, selfies ugu faahfaahsan Waxaan arkay. Waxaa jira qaabab kala duwan oo qurux aad u, laakiin dhammaan waxay aakhirka laga badiyay faahfaahsan.
The app camera Huawei waa wanaagsan, laakiin la'aanta ah ee hab HDR si toos ah waa diiqayo. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
dib waa wax badan oo macaan iyo safeeyey badan P9 ah, laakiin ma aha sida meelo sibiibix ah sida qaar ka mid ah casriga ah oo kale oo bir ah
Double-saxaafadeed button mugga marka qufulan si degdeg ah u qaataan photo ah ee ka yar hal labaad
qalabka app-control Huawei waa wanaagsan godka awood socodka iwm
A apps dhinac saddexaad yar yimaado pre-rakibay, laakiin waxa loo saari karaa
Waxaa jira theme dhinac saddexaad ah in ka saaraysaa goobooyin fool xun agagaarka walxood app on homescreen weli aan ku rakibi lahaa Launcher dhinac saddexaad ah sida Nova ama Google Hadda Launcher
Waxaa jira blaster IR ah ee hogaanka u xukuntid TV
The Huawei P9 Plus waa gaar ah si ay u Vodafone UK la joogo, laga bilaabo £ 500 on canshuur pre-paid a. Qiimaha dukaano dhinac saddexaad kala duwan.
In la barbardhigo, ka P9 yar Kharashka £ 449, Samsung Galaxy ee S7 Edge Kharashka £ 639, ka Google Nexus 6p Kharashka £ 449 iyo Apple iPhone 6S More Kharashka £ 619.
camera sawir waa weyn, ka dual camera danbe waa xiiso leh iyo fiirin iyo dareenka of phone waa uruursanayey top. screen ma aha sida tegayo sida ay xafiiltamaan, laakiin weli waa wanaagsan raadinaya, halka scanner faraha ku yaala gadaasha dambe ee ayaa muran la'aan waa ugu fiican ganacsiga.
Waxa kaliya EMUI Huawei ee heysta telefoonka dib – ma aha sida soo jiidasho ama isticmaali karo sida ugu versions kale Android. Qaar ka mid ah waxa ay jeclaan doonaan, Anigu ma aan samayn.
Iidooyinka: Muuqaal wanaagsan, dareensan weyn, camera sawir fiican, camera gadaal weyn dual, scanner faraha cajiib ah, nolosha batteriga hufan, USB-C, blaster IR, taageero card microSD
Arrrimaha: EMUI ma aha arrin ilaa la xoqo, screen for VR ma wanaagsana (xallinta hooseeyo), Press taaban yara of a Sheekadaas, gaar ah si ay u Vodafone UK, batari ma saari karo
USB-C leh xukun degdeg ah. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Android, Qodobka, Qalab, Huawei, Telefoonada Mobile, Dib u eegida, Samuel Gibbs, Telefonada casriga ah, Technology
← Man v Machine: Kombiyuutaro Cook Can, Qor oo Rinji Better Us Badan? OnePlus 3 Review →